Filtrer les éléments par date : mardi, 25 février 2020
mardi, 25 février 2020 21:17
Fanambarana avy amin'ny Vovonan'ny Holafitry ny fahasalamana
Manao antso ny fikambanan'ny Dokotera, ny Farmasiana, ny Dentistes, ny Vétérinaires, ny Sages-femmes, ny Infirmiers ary ny Psychologues, mba samy hanamarina ny vaovao ahely ny rehetra mba tsy hitarika savorovoro sy ahiahy na fiantsoana fitsaram-bahoaka.
Mitovy daholo ny rehetra hoy ireto mpisehahatra amin'ny fahasalamana, ary tsy maintsy tsaboina arak'izay fitaovana ananana ny rehetra.
Miantso fitoniana sy filaminana ho an'ny rehetra ary hanaja ireo tobim-pahasalamana sy hopitalim-bahoaka hanatanterahana ny asam-pitsaboana.
mardi, 25 février 2020 21:08
Belo Tsiribihina: Lakam-by misy motera rendrika, 44 avotra, zaza 1 tsy hita popoka
Tra-doza, androany maraina, teny amin’ny reniranon’i Tsiribihina ny lakam-by misy motera iray "Longomamy" raha hiakatra hiazo an’i Miandrivazo.
Avotra ny 44 tamin’ireo mpandeha tao anatiny, zaza iray kosa no tsy mbola hita hatramin’ny hariva teo.
Mitohy ny fikarohana, nandefa sambokely haingam-pandeha ny Faritra Menabe hanafainganana izany.
mardi, 25 février 2020 21:02
Sambava: Mpamily Bajaj nifanindrona antsy
Mpamily Taxi Bajaj iray no voatsatoka antsy nataon’ny namany samy mpamily ny zoma lasa teo iny teto Bel Souvenir. Nidina tety hifotony ny avy amin’ny Polisim-pirenena nijery sy nanao fanadihadiana momba ity tranga ity.
Ny manodidina teo no nahita ireo nifanenjika fa tsy fantatra ny antony fa ny teny hoe : aloavy ny volako ...no heno tao anaty fifamalina nisy tamin'izy ireo. Nentin’ny Polisy teo amin'ny biraon’ny kaomisaria ny Taxi Bajaj iray, izay efa tsy nahitana batery intsony nandritra ny fitsirihana natao.
Nilaza ilay mpamily nahavanon-doza fa : ''tsy tongatonga ho azy izao fa noho fivadiham-pitokisana nisy teo aminay roa satria nanao bizina izahay ka nivarotra ''Big Boss 90 degré'' tamin'ny 300 000Ar ny iray ka 100 000 Ar isaky ny fitaovana lafo kanjo hatramin'izao dia tsy azo ny vola ka izao no niafarany ».
Eo ampelan-tanan’ny Polisy ny raharaha, manohy ny fanadihadiana.
mardi, 25 février 2020 20:38
Ranobe - Amboasary Atsimo: Notafihin’ny dahalo radoko sy rasazy tao amin'ny CSB
Notafihin’ny dahalo ny mpiasan'ny fahasalamana tao amin'ny CSB Ranobe Distrika Amboasary Atsimo ny alin’ny alatsinainy 24 febroary 2020. Voavely vodibasy sy voakasi-tanana ilay mpitsabo sy mpampivelona miasa ao, avy eo norobain’ireo olon-dratsy ny fananan’izy ireo.
mardi, 25 février 2020 20:35
Ejipta: Nodimandry teo amin’ny faha-91 taonany ny filoha teo aloha Hosni Moubarak
Nindaosin’ny fahafatesana tao amin’ny hopitaly miaramila Galaa ao Caire renivohitr’i Ejipta, androany talata 25 febroary 2020 ny filoha ejipsiana teo aloha Hosni Moubarak.
Mohammed Hosni Moubarak no anarany feno, Hosni Moubarak no fiantso mahazatra azy. Izy no nitondra an’i Ejipta teo anelanelan’ny 14 oktobra 1981 sy 11 febroary 2011.
Hetsi-bahoaka teo amin’ny Kianja Tahrir, nampian’ny miaramila, no nampiongana azy teo amin’ny fitondrana. Nandriaka ny rà, maro ny namoy ainy, manodidina ny 850, teo anelanelan’ny 25 janaory ka hatramin’ny 11 febroary 2011.
Voaheloka higadra mandram-pahafatiny i Hosni Moubarak noho ireo ain’olona nafoy nandritra io hetsika-bahoaka io.
mardi, 25 février 2020 14:14
Coronavirus: Mahavelombolo ny voka-pikarohana vaksiny fanefitra hitan’ny Sinoa
Araka ny nambaran’ny ambasadaoro Sinoa any Rosia dia mikaroka vaksiny fanefitr’ilay valanaretina « coronavirus » ny any Chine. Mahavelombolo ny vokatra azo hatreto hoy ity diplaomaty ity.
mardi, 25 février 2020 14:10
Maroantsetra: Mitokona ireo mpampiofana ao amin’ny CRINFP
Mitaraina ireo mpampiofana ao amin’ny CRINFP (Centre Régional de l'Institut Nationale de Formation Pédagogique) toeram-pamolavolana sy fanofanana ireo mpampianatra mpanabe eto Maroantsetra, fa tsy zarizary ny tontolo iasan’izy ireo, tsy misy dinika sosialy hanatsarana ny fiainana sy tombontsoa tokony sitrahan’ny mpiasa.
Niroso amin’ny fitokonana izy ireo fa tsy mandray ny andraikiny ny tompon'andraikitra.
mardi, 25 février 2020 10:00
Fantatrao ve: Inona izany fandrindran'asa na Planification?
Mety maro ireo zavatra tiana atao, fanontaniana mipetraka foana ny hoe iza no atao aloha, iza no maika, aiza ny fitaovana sy ny vola anatanterahana ny asa, iza no hanao azy, oviana no vita ny asa, atomboka oviana?
Voalohany, dia apetrao tsara aloha inona ilay tanjona lehibe tiana ho tratra. Zarazarao madinika amin'izay, inona no tanjona lavitr'ezaka, antoniny ary fohy ezaka.
Ny Planification na lamin'asa na fandrindran'asa izany dia fametrahana lamina, ara-potoana, ara-pitaovana, arak'olona hamita asa iray na maromaro ahatratrarana tanjona iray.
Tsy misaraka amin'ny famaritana ny fotoana izany ny lamin'asa.
Ny asa iray dia azo zaraina zanak'asa maromaro, ka azo atao miaraka miainga ny sasany, misy kosa asa madinika tsy maintsy miandry ny fahavitan'ny asa iray vao azo atomboka, ka raha misy fahatarana izany ilay asa voalohany dia hiantraika amin'ny fe-potoana napetraka ahavitan'ny asa.
mardi, 25 février 2020 09:57
25 février 2020: Mardi gras
Mardi gras est une période festive, qui marque la fin des jours charnels, ou semaine des sept jours gras. Le Mardi gras est suivi par le mercredi des Cendres et le carême, pendant lequel les Chrétiens sont invités à manger maigre, traditionnellement en s'abstenant de viande.